एउटा वर्गकै वर्चश्व बचाइराख्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार
युद्धबाट शान्तितर्फको नेपालको सङ्क्रमण बडो गन्जागोले देखिन्छ । धेरै टिप्पणीकारहरूले अराजकता आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिएका छन्, उता संस्थापनालाई चाहिँ सामाजिक संरचना भताभुङ्ग होला र राष्ट्र टुक्रिएला भन्ने डर छ। तर यस्तो डर भ्रमपूर्ण छ। नेपाल त्यत्ति खराब अवस्थामा पुगेको छैन। नेपालको सङ्क्रमण काल भद्रगोल र अन्योलपूर्ण अवश्य छ, अराजकतापूर्ण भने छैन। बाहिरियाहरूलाई यो अवस्था रहस्यपूर्ण र वाक्कलाग्दो लागे पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले सुर बिराएको छैन। नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दबाब खप्न सक्ने क्षमता अन्तरनिहित छ जसले आमूल रूपान्तरणलाई थेग्न सक्छ।
Last Updated on Saturday, 04 February 2012 14:24
वन्दुकको छाँयामा संविधान जारी गर्न सकिन्न ।
झन्डै सात महिना लामो अन्यौलपूर्ण राजनीतिवाट मुलुकले सरकार पाएको छ । यसले लामो राजनीतिक गतिरोध र शान्ति र संविधानका लागि आधार तयार भएको छ । पहिलो, सरकार विहीनतावाट वहुमतकै आधारमा भएपनि वैधानिक सरकार वन्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । दोस्रो, एनेकपा माओवादी जुन लामो समयसम्म सत्ता साझेदारीको विषय नटुंग्याएसम्म शान्ति र संविधानलाई अगाडि वढाउन चाहेको थिएन
प्रदिप ज्ञवाली - नेता नकेपा एमाले
Last Updated on Wednesday, 23 March 2011 11:21
छया ! नेतालाई संविधान भन्दा सरकार ठूलो
अहिले नेपालीहरुले जान्न चाहेको कुरा तथा नेपालीको मनमा उव्जिएको प्रश्न एउटै छ । सरकार कि संविधान ठुलो रु राज्य संचालनका लागी दुवै कुरा उस्ता उस्तै पनि लाग्न सक्छ । तर वर्तमान अवस्था सरकार भन्दा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ । विडम्वना ! हाम्रा सभासद र राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ता , कुर्सी र सरकार केन्द्रित वनेका छन् । सरकारमा ध्यान दिएको कुरा पनि ठिकै हो तर संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका राजनीतिक दललाई कामै नगरी सरकार केन्द्रित हुन पक्कै सुहाउदैंन । यस्तो अवस्थामा पनि कतै नभएको राजनीति सुरु भएकोछ ।
Last Updated on Tuesday, 15 March 2011 03:58
काठमाण्डौमा रिल्याक्स गर्न आएका हैनौं ।
माओवादीले वाइसिएल भङ्ग गरि उस्तै खाले दस्ता स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरेकोमा हामीलाई धेरै शंकाको रुपमा हेरिएको छ । जनविद्रोहका लागि यिनीहरुले यस्तो गरिरहेका हुन् भनेर पनि भनिएको छ । वाइसिएलको वदनामको पाप पखाल्न अनि विशेष कामका लागि यो आएको पनि भनिएको छ । ती सवै कुरा गलत छन् । ब्यापक युवाहरुलाई संगठित गर्ने र सचेत पार्ने , उनीहरुलाई जनताको सुरक्षा गर्ने र सेवक वनाउने , उनीहरुलाई श्रममा लगाउने र काम र माम दिने काममा लगाउने भनि त्यो बनाइएको हो। उनीहरुलाई संघर्ष कर्ताको रुपमा पनि उतारिनेछ । जस्तो, समयमा संविधान जारी गर्न पनि उनीहरुले वाहिरवाट सचेत पार्ने र दवाव दिने काम गर्दछन् ।
लोकेन्द्र बिष्ट मगर --- एमाओवादी नेता
मगरसंघले नै भाँड्दैछ मगर समूदायलाई
आँधी हुरी आउनु अघिको निस्तब्धता नबनोस् यो
पुनहरु छुट्टिएर गए जाऊन त्यसले केहि लछारपटार पार्देन भन्दै भाषण गरि हिड्ने त्यसका अध्यक्ष झक बहादुर थापा लगायत नेपाल मगरसंघका केन्द्रिय नेतृत्वको दलीय राजनैतिक स्वार्थका कारण विश्वभर छरिएर रहेका मगरहरु एकजुट हैन बिखण्डनको संघारमा पुगेकाछन् । पुन विवादले विश्वभरका मगरलाई चिन्तित बनाइरहेको बेला बिखण्डन ल्याउन सक्ने उक्त खतरनाक विवादमा मगरसंघ केन्द्रिय समिति चुँ बोलेकोछैन । यस प्रकरणमा उ दोषी रहेको केन्द्रिय समितिको मौनताले नै बोलिरहेकोछ । एकजुट गराउनुको साटो झन फुटाउन पट्टि लागेको देखिन्छ ।
विश्वभर छरिएर रहेका मगरहरुको मेल संजालमा पुन समाजका संगठन प्रमुख तिलक पुर्जाले मगरसंघका केन्द्रिय नेताले नै पुनलाई मगरबाट छुट्याउने राजनीति गरेको तितो पोखेपछि मगरसंघ केन्द्रिय समितिको च्यालेन्ज नै आएकोछ । त्यसमा लेखिएको शब्द जस्ताको तस्तै यहाँ दिइएकोछ-
सबै लाई नमस्कार
पुन मगर लाई अलग गर्न पाइदैन भन्ने बहस को लागि यहाँ लाई धन्यबाद, हो, पुनमगरहरु मगर समुदायको एक अभिन्न तथा बिसिस्त मुटु हो, नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिको कुनै पनि पदाधिकारीहरुले पुनमगरहरुको आफ्नै भाषा छैन त्यसैले उनीहरु मगर हैनन भनेको कसैले प्रमाण ल्याउछ र प्रमाण जुट्छ भने उसलाई तत्काल पदबाट बरखास्त गरिन्छ, यो तिलक पुन मागर जीले उपयुक्तत प्रमाण ल्याउनुस हाम्रो च्यालेंग, यदि प्रमाण जुट्छ भने उक्त्त ब्यक्क्तिलाई मगर संघको कुनै पनि पदमा एक मिनेट पनि बस्ने हैसियत हुदैन, कृपया तिलक जी यो प्रमाण ल्याउनुस, होइन भने तपाई आफै नै पुन मगर लाई मगर बाट फुटाउने अभायणमा हुनुहुन्छ, सिङ्गो मगर लाई गलत संचार गर्न पाइदैन ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ
त्यसको प्रत्युक्तरमा आदिवासी जनजाति युवा महासंघका महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले लेखेको शब्द पनि यहाँ पेस्ट गरिएकोछ-
पुनमगरलाई मगर समुदायबाट छुट्याउने खालको मगर घटक प्रयास कसैले गर्छ -चाहे त्यो मगर संघ केन्द्रको कुनै पदाधिकारी होस् वा तिलक पुन जी होस् अथवा पुन समाज नेपालका पदाधिकारी होस्) जो कोहि लाई पनि पदमा बस्ने नैतिकता छैन, यदि यस्तो मगर फुटाउने खेल कसैले गर्छ भने त्यसको बिरुद्दमा **"मगर एकताको राष्ट्रिय आन्दोलन" हुन्छ, यसको अगुवाई हामी युवाहरुले गर्ने छौ, र कसैले पनि पुनमगरहरुलाई मगर होइन भनेर गलत संदेश दिनु आममगरको बिरुद्दमा हुन्छ, यो हाम्रो एकता भाड्ने प्रयास मात्र हो, यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन, ** पुनमगरहरु मगर समुदायको एक अभिन्न तथा बिसिस्त मुटु हो, नेपाल मगर संघ
केन्द्रिय समितिको कुनै पनि पदाधिकारीहरुले पुनमगरहरुको आफ्नै भाषा छैन त्यसैले उनीहरु मगर हैनन भनेको कसैले प्रमाण ल्याउछ र प्रमाण जुट्छ भने उसलाई तत्काल पदबाट बरखास्त गर्नु पर्छ यसको सुरुवात हामी गर्छौ, कृपया तपाई हरु सहयोग गर्नुस ।
ज्ञानेन्द्र पुन मगर
आदिवासी जनजाती युवा महासंघ, नेपाल
केन्द्रिय समिति, काठमाडौँ
गएको मगर सक्रान्तिमा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम नगरेर टुडीखेलमा केहि कलाकार जम्मा गरि डिस्को नचाउने केन्द्रिय समितिले मगरसंघलाई कता लैजान खोज्दैछन् भनि खोज्नेहरुलाई राम्रो जवाफ फर्काइदिएकोछ । केन्द्रिय समितिले आउने जनगणनाका लागि कुनै कार्यक्रम गरेकोछैन । देशभर रहेको स्थानीय संस्थालाई परिचालन गरि जनगणनामा कार्यक्रम गरे मगरको जनसंख्या बढ्ने थियो । तर लाग्छ, समितिलाई यसमा कुनै सरोकार छैन । यूएनडीपीको डलर ल्याएर मगरात घोषणा सम्बन्धि कार्यक्रम त गरिएकोछ तर जेठमा हुन लागेको जनगणनाको लागि भने कुनै तयारी र कार्यक्रम देखिदैन । संविधान समयमा नबन्ने निश्चित जस्तै छ तर त्यसका लागि डलर पाएपछि पाल्पा तानसेन ओर्लने नेताहरुले मुखैमा आइपुगेको जनगणनामा भने चुप्पी साध्नुले नियत नै खोट हो कि भन्ने देखिन्छ ।
यसपटकको २९औ मगर दिवसमा त झन केन्द्रिय समितिले रमितै गरेर हद पार गरेकोछ ।
राजधानीमा कार्यक्रम गर्न नसकेपछि १७ वटा अन्य मगर संगठनहरुले मगर दिवस मनाए । तर केन्द्रिय नेताहरु भने बुटवलमा अन्चलस्तरिय कार्यक्रम गर्ने भन्दै मगर फुटाउने राजनीतिमा ब्यस्त रहे । रुपन्देहीमा मनाइनुको कारण थियो । नेपाल मगरसंघ जिल्ला समिति रुपन्देहीको १८औं अधिवेशनबाट निर्वाचित दल बहादुर बिरकट्टाको समूहलाई मान्यता नदिई बाइपास गरि आफ्नै आसेपासे जम्मा गरि अर्को समानान्तर संघ खडा गर्ने केन्द्रिय समितिले त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न यसपटकको मगर दिवस रुपन्देहीमा मनाउने निर्णय गरेकोथियो । आफ्नो दल सम्बद्ध ब्यक्ति समितिमा नआउदा यत्रो बितण्डा गर्ने केन्द्रिय समितिमा लोकतन्त्र प्रतिको बुझाई प्रस्ट देखिन्छ भने आफ्नै जाति भित्र पनि आफ्ना दलका प्रमुख प्रचण्ड र झलनाथ खनालको आज्ञा शिरोपर गरि अन्य दलका ब्यक्तिलाई नस्विकार्नु कहाँसम्मको न्यायोचित र बुद्धिमता मान्न सकिन्छ ? त्यसमाथि बिरकट्टा समूहले दिनहू जसो रचनात्मक कार्यक्रम देखाउन थालेपछि अत्तालिएर केन्द्रिय समितिले आफ्नो पपेट समानान्तर संस्थाको हरिबिजोग नहोस् भनि यो योजना बुनेकोथियो । किनभने जनमत र जनाधार नभएको यो समिति निस्क्रिय जस्तै थियो ।
तर मगरसंघका केन्द्रिय नेतृत्वको संकीर्ण दिमागको परिणाम यसपटकको मगर दिवसमा पनि फेल भएकोछ । अन्चलस्तरिय भनिएपनि कार्यक्रममा सहभागी हुन रुपन्देहीका वडा , गाविस र नगर स्तरिय समितिका बहुसंख्यक समितिहरु नै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । नवलपरासी र कपिलबस्तुबाट पनि कार्यक्रममा सहभागीता भएन । गुल्मी, पाल्पा र कपिलबस्तुबाट केहि बसमा मान्छे ओसारिएकोथियो । स्वंय केन्द्रिय समितिले बनाइदिएको संस्थाका अध्यक्ष यम बहादुर थापाको गाविसबाट समेत मान्छे आइदिएनन् । उनी स्वंयले भाषणमा आफ्नै गाविसमा धुमधाम दिवस मनाइएकोले आउन नसकेको स्पष्टिकरण दिनु परेकोथियो । केन्द्रले अध्यक्षको मान्यता दिए पनि स्वयम यम बहादुर थापाको गाविस पडसरीले नै वहिष्कार गरेको थियो । पडसरी गाविसले आफना छिमेकी गाविस चिलिया हाटीफसा्रटिकट संग मिली संयुक्त रुपमा पडसरी मा वि स्कूलमा बाजा र दोहरी कलाकार सहितको भव्य कार्यक्रम गरेका थिए । मगर सभासदहरुलाई आमन्त्रित गरे पनि कुनै सभासद उपस्थित भएका थिएन । सभासद सुरेश आलेमगर र सभासद एमएस थापामगर लाई सम्मान गर्ने भने पनि दुवै जना सहभागी भएनन । हरेक समितिलाई केन्द्रिय समितिले नै बिशेष अनुरोध गरेपनि कार्यक्रममा सात आठ सय भन्दा मान्छे जम्मा भएनन् ।
सहभागीहरुको विवरण :
पाल्पा १ बस
देवदह गाविस ३ बस
सालझण्डी गाविस ६ बस
दूधराक्ष गाविस ५ बस
रुद्रपुर गाविस ४ बस
जम्मा १९ बस गुणा ५० गर्दा ९५० मगरहरु सहभागी भएको देखिन्छ, साथै बुटवल नगर धेरै वार्डहरुले आफै मनाएकाथिए । ।
तर आफ्नो कन्तबिजोक सबैले थाहा पाउने र रहस्य खुल्ने डरले केन्द्रिय समितिले माओवादी र एमाले नजिक अनलाईन पोर्टलमा केन्द्रिय समितिको प्रोपोगाण्डा बमोजिम लाखौ मान्छे आएको प्रचार प्रसार गरिरहेकाछन् । अध्यक्ष झक बहादुर थापाले मीडियामा बिसौं हजार मान्छे जम्मा गर्ने भनाईलाई स्थापित गर्न आफ्नो नजिकका मीडियालाई उपयोग गरिएको हो ।
बिरकट्टा समूहको बलियो पकड रहेको रुपन्देहीमा प्रत्येक गाविस र इकाई समितिलाई कार्यक्रममा जसरी भएपनि आउन कडा निर्देशन दिइएकोथियो । केन्द्रिय नेताहरु स्वंयले पनि स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई भेटी यो निर्देशनलाई मान्न बिशेष दवाव दिएकाथिए । तर यस्तो दवावले काम गरेन । सबैले आ आफ्नै गाँउ गाउमा कार्यक्रम गरेर केन्द्रि समितिको दादागिरीलाई लोप्पा खुवाइदिए । रुपन्देही , नवलपरासी, कपिलबस्तुले केन्द्रिय नेतृत्वको अबैधानिक र जाति लडाउने निर्णयको अवज्ञा गरेर केन्द्रिय नेतृत्वले गलत बाटोमा डोरयाउदा आखा चिम्म गरेर लाग्दैनन् भन्ने देखाइदिएकोछ । एक स्थानीय मगर नेताको भनाईमा केन्द्रिय मगर संघको नेतृत्वले मगरको हकहित र अधिकारको बारेमा काम गर्न वा वकालत गर्नुको साटो आ आफ्नो दलको स्वार्थमा मगर मगरमै लडाउने षड्यन्त्र गर्न थालेपछि कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको हो । आ आफ्नो दलको भातृसंगठन जस्तै माओवादीको मगर मुक्ति मोर्चा, एमालेको लोकतान्त्रिक मगर संघ जस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन यसो गरिएको बताइन्छ । रुपन्देहीमा उनीहरुले रोपिदिएको दुई मगर संघबीचको विवादलाई केन्द्रिय समतिले मगर दिवसको मौका पारि झन बढी चर्काइदिएकोले पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
दलको स्वार्थमा लागी मगर एकता भाड्न लागिपरेका केन्द्रिय नेतृत्वले पुनः यसपटक रुपन्देहीमा मुखको बलमा खानुपरेको हारबाट पाठ सिक्छ कि सिक्दैन भविष्यले नै बताउला । त्यसले भोलिको बाटो प्रष्ट देखिनेछ । यस अघि आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई रुपन्देहीमा जिताउन नसकेपछि तिल्मिलाएका केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष झक बहादुर थापा, बसन्त घर्ती लगायतका केन्द्रिय नेतृत्वले रुपन्देहीमा एमाले र माओवादीको झण्डा गाड्ने आ आफ्ना दलको निर्देशनलाई पूरा गराएरै छाड्ने कसम खाएका जस्तो देखिन्छन् । ति मगर एकता भाँडेर दल बलियो बनाउन जन्मै देखिको बल लगाइरहेको देखिन्छ । यसले मगर समूदायलाई एकता हैन बिखण्डनको बाटोमा धकेलिरहेकोछ । यसपटक मगर दिवसमा त्यो प्रष्ट देखियो । यदि यहि बल र बुद्धि आफ्नै जाति बलियो बनाउन लगाएको भए त्यसले राज्यसत्ताको हरेक संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वका लागि कति ठूलो दवाव श्रृजना गथ्र्यो होला ।
यसबारे राज्यसत्ताको पूर्व समाचार पढ्नोस्
गोविन्द घर्ती मगर र सूर्य सारु मगर , रुपन्देही
Last Updated on Saturday, 05 March 2011 13:10